Usuku: NgoJanuwari 4, 2020
Imirhumo ye-ISPARK inyuke ngo-2020?
Iintlawulo zokupaka i-ARKarkark kuMasipala weNqila ye-Istanbul zonyuswe zaya kuma-40 epesenti. Abemi baphendule kwiinqaba ezenzeke ngesigqibo esithathiweyo kwintlanganiso zepalamente zikaDisemba ka-2019 e-IMM. elidlulileyo [More ...]
Umkhankaso wePiano yeGoodness kwisikhululo seMetro yase-Üsküdar
Intshukumo yokuncoma iqalile kumgca we Üsküdar - Çekmeköy. Umculi u-Barutay Kartal udlala ipiyano kwisikhululo sase-Üsküdar ukunceda abantwana basesitalatweni. Ukusebenza njengeNgcali yoQeqsho lweMidlalo kwiCandelo loLutsha neMidlalo [More ...]
Iiteksi eTrabzon Zibuyela kwiiteksi
Uvavanyo malunga neengxaki zeTrabzon, intlanganiso ibiku-ajenda yedoni yesimanje. U -mer Hakan Usta, uMongameli we-Chamber yaBaqhubi kunye neeMoto, wathi bayakholelwa ukuba abantu baseTrabzon kunye nabathengisi bayoyivuyela iinguqu. [More ...]
IiParkomats zokuqala zabafazi zaqala ukusebenza ku-Eskişehir
Ekuqaleni kukaDisemba, ii-parkomats zokuqala zabesetyhini zaqala ukusebenza kuMasipala wase-Eskişehir Metropolitan, ezazibhengeza ukuba ziya kuqasha amagosa epaki yababhinqileyo ngesibhengezo kwii-akhawunti zabo zosasazo lwendaba. Waqala ukusebenza kwisitalato iMahmut Pehlivan eKızılcıklı ngeentsuku zokuqala. [More ...]
Isikhululo sesithathu sifikelele kwiNarlıdere Subway
UFahrettin Altay -umatshini wokwakha umgca wokuxhuma wedolophu weNarlıdere wafika kwisikhululo sesithathu. İzmir Metropolitan Department of Rail System department, Bornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro line Narlıdere'ye [More ...]
U-Mısra Selz Sel, owaphulukana nonyana wakhe u-Oğuz Arda Sel ngexesha lentlekele yoololiwe e-Çorlu nge-8 kaJulayi ngo-2018, wabhengeza ukuba kuye kwavulwa izityholo ezimbini zokutyhola uMongameli kunye nenkundla. Isithili seCorlu seTekirdag [More ...]
I-49 ii-IETT eziMitsha eziVulwe eIstanbul
I-IETT ivule imigca emitsha engama-34, engama-15 kuyo kwicala laseYurophu kunye ne-49 kwicala lase-Anatolian, ukukhawulelana neemfuno zothutho zabahlali base-Istanbul. I-IETT ijonge ukubonelela ngeenkonzo zokuhamba ezikhululekileyo kubahlali base-Istanbul. Ezothutho ukuya eMarmaray [More ...]
Iindaba Ezilungileyo kuBahlali! Isicelo seDigital Tachograph sithunyelwe
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko zophuhliso lazise ukuba ukusetyenziswa kwe-tachograph yedijithali kumiselwe kumhla wama-30 kuJuni 2020. Izolo e-Istanbul nase-Ankara kwizixeko ezininzi, ngakumbi abathutha, iSebe lezothutho kunye neZothutho 'I-tachograph yedijithali' iziswe [More ...]
Icandelo loMphathiswa lilungisa ukuTshatisa koTyala ngengozi kubuhlobo beNtengiso kunye ne-TCDD
Icala le-Corlu lokulungisa ukubulawa kwabantu emva kokuphendula komphathiswa kule ntshukumo yombuzo, Ingqina lengcali u-Bekir Binboğa, uSıddık Yarman kunye no-Mustafa Karaşahine bali-14 beekhontrakthi zokucebisana ezahlukileyo ezizigidi ezingama-1 amawaka [More ...]
Advanced Technology ukuba Nokukhawuleziswa yeNguqu Turkey Car Domestic
Bursa ziququzelelwe Technical University of Automobile Turkey kunye panel Bursa, undwendwe BCCI USihlalo Ibrahim Burkay, uthe imveliso yemoto zasekhaya ziya kukhawulezisa Turkey i-medium-phezulu kwaye ukuguqulwa ophezulu-anobuchwepheshe lokuvelisa, [More ...]
Isitalato i-İzmit Salim Dervişoğlu iya kuba yenye i-D-100
UMasipala weNgingqi waseKocaeli, oqalise iiprojekthi eziza kunciphisa ukugcwala kwezithuthi kunye nokwenza lula ukuthuthwa kwabemi, uvula i-Izmit Salim Dervişoğlu Street, eyandisiweyo kwiindlela ezi-2 x 2 ezibini. Njengolunye uhlobo lokuhamba nge-D-100 Highway [More ...]
Municipalityzmir UMasipala oMbaxa we-abzmir Osekwe kwindawo yokumisa izithuthi zokupaka izithuthi
UMasipala oMbhaxa Izmir, owokuqala hlobo ngokutyikitya iphulo yokupaka imoto ezilahliweyo eyasungulwa eTurkey. Indawo yokupakisha eMenemens iya kuba sisisombululo kwingxaki yokuqhekeza kuyo yonke idolophu. Izmir Metropolitan Municipality, onamava kuyo yonke idolophu [More ...]
Iingcali zeeNgozi zoThutho lwe-Çorlu Hlawula i-14 yezigidi ze-TL kwimisebenzi ye-1 yokuSebenza
I-Çorlu yengozi yoqeqesho etyunjelwe njengengcali yengcali u-Mustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman I-14 eyahlukileyo umsebenzi wokubonisana kwiCandelo lezoThutho wabonakala efumana isigidi esili-1 lamawaka eepawundi. Beka ngakumbi iNyaniso [More ...]